Jeriko - Wikipedia
Araka ny Baiboly, ao amin'ny Bokin'i Josoa, rehefa avy niditra tao amin’ny Tany Kanana ireo Zanak’i Israely notarihin’i Josoa (na Josoe), dia i Jeriko no tanàna voalohany azony (Josoa 2 – 4). Nirodana noho ny fitsofana trompetra nataon’i Hosea zanak’i Nona ny manda niaro ny tanàna. Naringana ny mponina tao sady lasa voaozona ilay tanàna. Tamin’ny andron’i Jesoa dia nanana ny maha izy azy i Jeriko.
Ao amin’ny Testamenta TalohaModifier
Araka ny Bokin’i Josoa, ny tanàna voalohany tao amin’ny tany Kanaana izay azon’i Josoa sy ny Zanak’i Israely tokony tamin’ny taona 1493 tal. J.K. dia i Jeriko. Ny Bokin’i Josoa dia mitantara fa fito andro taorian’ny nahatongavany dia namabo an’i Jeriko ny Israelita. Nirodanana ny mandan’i Jeriko taorian’ny nampihodidinana im-pito ny Fiaran’ny Fanekana amin'ny tanàna sy ny nitsofan’ny mpisorona fito trompetra (shofar) manodidina azy. Rava tanteraka noho izany ny tanànan’i Jeriko (Jos. 6:1-27). Ny mponina rehetra sy ny biby fiompy rehetra dia naringana avokoa. I Rahaba sy ny ankohonany ihany no afaka tamin’izany (Jos. 2:17). Ny tanàna sy ny entana azo baboina tao dia voaozona. Izao no tenin’i Josoa ny amin'izany:
“Dia nilaza fanozonana Josoa tamin'izany andro izany ka nanao hoe: Ho voaozona eo anatrehan'i Jehovah izay olona mitsangana manorina ity tanàna Jeriko ity indray; ny ain'ny lahimatoany no ho sazin'ny hanorenany ny fanambaniny, ary ny ain'ny faralahiny no ho sazin'ny hananganany ny vavahadiny.” (Jos. 6.26)
Araka ny Boky voalohan’ny Mpanjaka, dia naorina indray i Jeriko (taonjato maro taty aoriana):
“Tamin'ny andron'i Ahaba no nanorenan'i Hiela Betelita an'i Jeriko; ny ain'i Abirama lahimatoany no sazin'ny nanorenany ny fanambaniny, ary ny ain'i Segoba faralahiny no sazin'ny nananganany ny vavahadiny, araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Josoa, zanak'i Nona”. (1Mpan. 16.34)
Maro ny arkeology izay milaza fa ny ady tao Jeriko dia tsy mifanaraka amin’ny zava-misy ara-tantara satria tsy nimanda sady tsy nisy mponina ny tanàna tamin’io fotoana tantaraina ao amin’ny Baiboly io izay tokony ho tamin’ny taonjato faha-13 tal. J.K.
Ao amin’ny Testamenta VaovaoModifier
Ny Filazantsara dia miresaka fa i Jesoa dia nandalo tao Jeriko ka nanasitrana lehilahy jamba iray (Mar. 10.46; Lio. 18.35) na roa (Mat. 20.29), sady nampiala amin’ny fanao ratsiny ilay mpamory hetra atao hoe Zakaiosy (Lio. 19.1-10). Ny lalana eo anelanelan’i Jerosalema sy i Jeriko dia toerana nisehoan’ny fanoharana ny amin’ilay Samaritana tsara fanahy (Lio. 10.23-37). Voatsiahy ao amin’ny Epistily ho an’ny Hebreo ny nampianjerana ny mandan’i Jeriko (Heb. 11.30).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeriko&oldid=958577"
Dernière modification le 29 Novambra 2018, à 11:17
Voaova farany tamin'ny 29 Novambra 2018 amin'ny 11:17 ity pejy ity.